Omenala Rome | Akụkọ njem
Mariela Carril | | omenala, Rome
Rome ọ bụ otu n'ime obodo kachasị ịtụnanya na Europe. Ahụrụ m obodo a n'anya, ọ nweghị ike ịka mma karịa, nwee ọdịbendị ọzọ, na -adọrọ mmasị ... Enweghị ike ịda mba, agaghị ekwe omume ịnwe oge ọjọọ, ọ gaghị ekwe omume ịghara iju nzọụkwụ niile anya.
Rome dị egwu ma taa anyị ga -ekwu maka ya Omenala Rome, ịmara ihe tupu ime njem.
2 Omenala Rome
Obodo bụ isi obodo mpaghara Lazio na Italy ọ bụkwa obodo nke atọ kachasị na European Union. Ọ bụ obodo nwere puku afọ atọ nke akụkọ ihe mere eme wee bụrụ obodo ukwu mbụ nke mmadụ, na mgbakwunye na obi nke otu n'ime mmepeanya oge ochie kachasị mkpa na nke nwere mmetụta.
Akụkọ ihe mere eme na -esite n'okporo ụzọ niile, square ọ bụla, ụlọ ọ bụla. Ọ bụ obodo nwere akụ kacha nwee ụkpụrụ ụlọ na akụkọ ihe mere eme n'ụwa ma kemgbe 1980 ọ nọ na ndepụta Ihe Nketa Worldwa nke UNESCO.
Echere m na tupu ịga leta obodo ma ọ bụ obodo, mmadụ kwesịrị ịgụ, mee nyocha, mikpuo ozi gbasara ebe ọ na -aga. Yabụ, anyị nwere ike wulite usoro nkọwa nke ihe anyị ga -ahụ ma ọ bụ nwee. Nke ahụ anaghị akagbu ihe ijuanya, ma ọ bụ ịmata ihe, ma ọ bụ obi ụtọ. Kama nke ahụ, ọ na -eme ka ọ buru ibu, n'ihi na ọ nweghị ihe mara mma karịa ịhụ n'ime mmadụ ihe anyị maara naanị site n'akwụkwọ ma ọ bụ netwọkụ mmekọrịta.
Rome nke oge a bụ obodo eclectic, a kediegwu ngwakọta nke omenala na dịkọrọ ndụ. Na ọkwa mmadụ, ndụ na -agbagharị na ezinụlọ na ndị enyi nke ahụ na -ahụkwa n'ime ndị mmadụ na na ndụ kwa ụbọchị. N'agbanyeghị ịbụ isi obodo, enwere ikuku ụfọdụ nke nnukwu obodo na -afọdụ, ọkachasị na agbataobi na n'ahịa ha na agbanyeghị na ndị njem na -abịa ma na -aga.
Rome na nri na -aga ụkwụ na ụkwụ. Ọ bụghị ihe ọhụrụ. Gastronomy Roman dị mfe, mana ọ bara ụba yana nwee nnukwu ụtọ. Ndụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya metụtara nri, nzukọ, ịzụ ahịa, mgbe nri abalị gachara. Ndị Rom na -erikọ nri ọnụ, ya na ezinụlọ na ndị enyi, na oge okpokoro bara uru. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ụfọdụ nke a, ọ ka mma ịgbanahụ n'ụlọ nri ndị njem ma ọ bụ ebe ndị ama ama n'ezie.
Iji nweta nri dị mma na ezigbo nri ndị Rome, ị ga -apụ n'ụzọ a kụrụ akụ. Ebe kachasị mma iri nri na ị drinkingụ ihe ọ likeụ likeụ dị ka mpaghara bụkarị ndị na -enweghị ndị njem. Nke a bụ ụfọdụ ebe akwadoro: maka nri ụtụtụ ị nwere ike nwalee Caffé Sab't Eustachio, na nso Piazza Navona, na -arụ ọrụ kemgbe afọ 30. Maka nri ehihie, La Taverna dei Fori Imperiali, ụlọ oriri na ọ familyụ familyụ ezinụlọ adịghị anya na Colosseum, na Via della Madonna dei Monti, 9.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụ ahịa na iri nri na square ma ọ bụ ụkwụ, mgbe ahụ ị nwere ike ịzụ ahịa na Fa-bio, na nso Vatican, na Vía Germanico, 43. Maka nri abalị, La Carbonara, ụlọ oriri na ọ Italianụ Italianụ ndị Itali nke dị na Monti, na Vía Panispema, 214. Ọ bụrụ na ọ bụ Pizza, Gusto, na Piazza Augusto Imperatore, 9. Maka ezigbo ice cream, Ciampini, n'etiti Piazza Navonna na Steps Spanish.
Na-akwanyere ememme na nnọkọ na RomeNke bụ eziokwu bụ na e nwere ọdịnala ndị dị oke mkpa nye ndị Rome. Dịka ọmụmaatụ, enwere Ejịl, nke a na -emekwa na mba ndị ọzọ. Ememe Carnival na Rome na-ewe ụbọchị asatọ ị ga -ahụkwa ndị na -egwu egwu, ihe nkiri, ihe nkiri dị iche iche n'okporo ụzọ. Ọ bụ oge dị mma ịga n'okporo ụzọ wee nwee ọ enjoyụ ihu ọchị.
Krismas na Ista bụ ezumike Ndị Kraịst kacha mkpa n'obodo, na mgbakwunye na ha kara akara mmalite nke ezumike. Na mgbakwunye, a na -esi nri pụrụ iche maka oriri abụọ a dị ka panettone na panforte na ekeresimesi ma ọ bụ soseji Cotechino, na Ista Minestra di Pasquea, nwa atụrụ Angelo, achịcha Ista Gubana ... Ihe niile dị n'etiti Via Crucis, nke na -esi na Colosseum gaa na Nzukọ Ndị Rom na Fraịdee ọma, ngọzi nke Pope na Square St. Peter na oke ekeresimesi n'abalị na ụlọ ụka ndị e ji nri anụ ụlọ chọọ.
E wezụga ezumike Ndị Kraịst kwa Rome na -ebi ezumike mba, nke ebe a na Italy dị ọtụtụ. Obodo ọ bụla na -agbakwa nsọ yas na n'ihe banyere Rome bụ Saint Peter na Saint Paul. Ndị otu ahụ dara 29 maka June ma enwere igwe mmadụ n'ime ụka na ọbụladị oku sitere na Castel San't Angelo.
Nri, oriri, mmadụ ... mana ọ bụkwa eziokwu na isiakwụkwọ ọzọ mejupụtara akụkọ ihe mere eme na ụkpụrụ ụlọ Nke oku Obodo Ebighị Ebi. Ana m ejegharị na Rome oge niile, nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ naanị ugboro ole na ole ka m bu ụgbọ njem ọha. Ọ bụghị n'ihi na ọ naghị adabara kama n'ihi na ọ bụrụ na ihu igwe dị mma ma nwee akpụkpọ ụkwụ dị mma, ọ nweghị ụzọ isi tụfuo n'okporo ụzọ ya. Ị na -eme nchọpụta ọ bụla!
Ọ bụ ma ọ bụ ee, ndị ochie enweghị ike na ekwesịghị efu: gaa na Pantheon, nke Hadrian wuru na 118 BC, mee ka ahụ gị saa onwe gị n'ìhè ma ọ bụ mmiri ozuzo nke na -abanye n'ime oghere dị n'uko ụlọ, rịgoro n'elu ugwu. Ugwu Capitoline ma tụgharịa uche na Nzukọ a, nọdụ na steepụ nke Nzọụkwụ Spanish hụ Fontana della Barcaccia ma ọ bụ ụlọ nke onye na -ede uri Jhon Keats, gbaa igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ jee ije Site na Anticca, gagharịa n'ehihie Piazza Navona, tinye aka gị n'ime Bocca della Verita gaa na Oghere, ọ bụrụ na ọ ga -ekwe omume mgbe anyanwụ dara, gaa na Ahịa Campo de Fiori, banye Vatican, gaa na ngosi nka, na Capuchin Crypt, nyochaa ihe Ghetto ndị Juu na Trastevere, tụba mkpụrụ ego n'ime Isi iyi Trevi.
Cheta na Rome nwere puku afọ atọ nke akụkọ ntolite, site na Oge Ochie, ruo n'afọ mbụ nke Iso Christianityzọ Kraịst, Middle Ages, Renaissance ma ọ bụ isi Baroque nke obodo ruo n'oge a. Ụlọ ọ bụla, akụkụ ọ bụla, isi mmiri ọ bụla, nwere akụkọ ihe mere eme ya ma na -enye akara pụrụ iche n'ezie na omenala ndị Rom.
Dị ka o kwesịrị ịdị, otu njem ezughị. Ị ga -alaghachi Rome ọtụtụ oge, n'oge dị iche iche n'afọ. Ị ga -achọpụta ihe ọhụrụ mgbe niile ma ọ bụ hụ ihe n'anya n'anya na mbụ. Ngwakọta mmetụta dị n'etiti ịmara na ịmata bụ nke kacha mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Rome » Omenala Rome